Iwo matatu akanakisa Joaquin Phoenix mafirimu › Chikumi 3
Top 3 Joaquin Phoenix Movies
Kune vatambi vanonyangarika uye vanoonekwazve panguva isingatarisirwe. Zvakaitika naJohn Travolta, nekuda kwe Tarantino, mu "Pulp Fiction". Uye zvakaitika zvakafanana naJoaquin Phoenix muJoker, iyo yakanyanya acidic Batman villain yakambonyorwa.
Mhedzisiro yakafanana, kutangazve kwekusimba kukuru kwekudengenyeka mune zvese zviri zviviri. Uye ndezvekuti vatambi vakuru havamboregi kuva. Chete kuti iyo indasitiri dzimwe nguva inokanganwa nezvavo uye mukuvava ikoko kunogona kugara kwemakore zvinoita sekunge vaturikiri vakuru ava vakaremerwa nezvinyorwa zvakatokura zvekududzira kana kusiiwa kwave kuzivikanwa.
Ichokwadi zvakare kuti, kana iri nyaya yaJoaquin, kutanga kwake mubhaisikopo kwaive nechinangwa chechiso chinoyevedza chekumutsa manyawi evechiri kuyaruka. Uye zvichida izvozvo zvaizoremedza basa rake neimwe nzira. Asi kungavawo kuti mushure mekubudirira kwake kwepakutanga akazvitungamirira kune rumwe rutivi rwuya rusina mutsa uko mamiriro ezvinhu emhuri akashata zvikuru akamusundidzira, achironda rwendo irworwo kudivi romusango kwaaizopinza, asingade zvachose, mabhuku okududzira kure kure. kubva pane zvakanga zvatamba.
Nekuti Joaquin Phoenix inomutsa yazvino Dorian Grey inokwanisa kutarisisa zvakanyanya, senge yekudonha kusingagumi kana kuona kwechiedza. Nepo mumwe Joaquin Phoenix achikwanisa kupora nekukasira kupenya kwebhuruu kwemaziso ake kuti awane metamorphosis isingatarisirwe uye kuratidzika semutambi anoyevedza. Iyo yakanyanya chameleon mutambi wemazuva edu, pasina kupokana.
Top 3 Yakakurudzirwa Joaquin Phoenix Movies
Dudziro yehutsinye inoita iyo inosuruvarisa uye inovava chikafu chekuvakazve hunhu hunozova muvengi mukuru waBatman mune ramangwana. Uye kuti Batman ari kure kure echo mubhaisikopo, sechiroto chisingafungidzirwe pakati pekupopota, ruvengo, chirwere chepfungwa, kushungurudzwa uye zvese zvakaipisisa zvingafungidzirwa zvakarembera pamusoro pemunhu sebakatwa. Damocles.
Joaquin Phoenix akarasikirwa nemakirogiramu akawanda kutiratidza iyo kumashure yakatevedzwa nerozari yakamisikidzwa yevertebrae yake, zvekuti zvipfeko zvebhegi zveclown zvinoratidzira muviri usingagoneke, bhegi remapfupa. Pamusoro pemuviri, Joaquin anopedzisa basa rake reunyanzvi nechitarisiko chinotangira pakusanzwisisa, kubva mukuvhiringidzika kwepfungwa kuenda kuupengo uye ruvengo.
Pasi pekunyomba kwemunhu uyu mukududzirwa kwaakaita Heath Ledger akafa, Joaquin Phoenix anoburitsa zvese zvinokonzeresa kuti atore joke muchikamu chengano mubhaisikopo, akaipisisa pane vese vakaipa, vanobva kugehena repedyo pasi pepasi apo iye pachake munhu. zvisikwa zvinopedzisira zvazvimisa nemhosva yavo inosuwisa mukuparadza kunoitwa nyama.
Tichifunga kupokana kwakatenderedza kapoka, nezvose zvakabva mumagariro ekutanga asiwo zvechitendero, zvepfungwa uye zvetsika, zvine poindi yekusagadzikana. Nekuti pachine fungidziro yekuti tese tinogona kuve chikafu chekanoni, pane imwe nguva, uye kukundwa necharlatan wezuva uye delirium yake yamesiya.
Kuverenga paJoaquin Phoenix atove kumashure kubva kune zvese, mushure megore ra2010 umo bhaisikopo rake rehupenyu rakatidzidzisa mukushama kwake kunoshungurudza kwemweya, kwakabudirira. Kutera pakutsamira pane izvo centripetal masimba akatenderedza zvakanyanya kuita zvisina maturo shit uye kumuka mukunzwa hasha kwekunge waitwa anesthetized pamarwadzo ese ari munyika kutora mukana weanoshora zvakanyanya. Joaquin anoita iyi bhaisikopo chikumbiro chakakwana chekumuka mushure mekuparadzaniswa kunogona kuita kunge kure asi kunogara kwakahwanda.
Isu hatisi tese varwi vehondo mune yakasarudzika nzira yekuAmerica, nevarume vazhinji vachiri vadiki asi vari vega uye vachitotambudzwa nekushungurudzika kwavo uye kubatanidzwa kwakaoma. Doro, decadence, kuparadzwa uye iyo spark, mukana wembwa yakarohwa kuwana mune tenzi mutsva chikonzero chake chekufambira mberi ...
Iwe hauna kumbobvira uri pano
Mukudzokororwa kwake kutevedzera pakati pevakakuvara, kurohwa, kurangwa kana kukuvadzwa mavara, shamwari Phoenix haina kuremedza asi zvakapesana. Chingave chimwe chinhu sekuona timu yako ichihwina yega yega yemitambo yavo. Nguva dzose zvakafanana, hongu, asi hazvina kumbokwana nekuti basa rega rega ndiro basa rehupenzi rehunyanzvi. Hunhu hutsva hwega hwega hwasvika kubva kugehena reDante hunounza zvinhu zvitsva.
Pachiitiko ichi, pfungwa yacho inogona kuita seyakanyura. Mutsivi wemazuva ano uye wemumadhorobha watinogona kushamwaridzana nevasina hunhu vakaita saClint Eastwood mumigwagwa yeNew York kuburikidza naBruce Willis mumasango ane chiuru emagirazi kana kunyange Chuck Norris kana tikapusa. Asi Joaquin Phoenix haaizoziva maitiro ekuzviita neiyo monotone mbiri yegamba inotipa kuchengetedzeka uye runyararo kupfuura imwe nguva inoshungurudza. Phoenix anoshandura chinangwa chake chezvakanaka kuita chikonzero pane imwe nhanho, kurwa kwekusiya mweya wake kana zvichidikanwa ...
Zvikuru zvakaita seizvi nekuti sezvo bhaisikopo riri kufambira mberi tinoona zviya zvinopenya zvinoburitsa pachena vavariro dzechokwadi dzaJoe pakuita zvaanoita, kuti aregerere zvivi zvake kana kutyisidzira zvipoko zvinosimbirira pakusunungura kutya kwekare... Nekuti hongu, zvakadzama. pasi, zvinhu zvose zvinogona kuva fungidziro isina chokwadi iyo isingatijekesere kana akanga ari pano uye kana chisimba chakawanda chine pfungwa chete yekururamisira kana kana chimwe chinhu chichitipukunyuka.
1 chirevo pa "Matatu emhando yepamusoro Joaquin Phoenix mafirimu"
Pingback: Iwo matatu akanakisa Keanu Reeves mafirimu Kurume 3